Mampiseho ny fomba fampiharana ny fitsipiky ny sivana any Shina ny lalao vaovao ao amin’ny Tencent · Global Voices teny Malagasy
Mampiseho ny fomba fampiharana ny fitsipiky ny sivana any Shina ny lalao vaovao ao amin'ny Tencent
Voadika ny 16 Mey 2019 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Shqip, polski, Italiano, English
Sary nalaina avy amin'ny Game for Peace. Manao veloma Ilay mpilalao maty ary nosoloina tselatra hazavana ny rà. Sary avy amin'ny Stand News.
Navoaka tao amin'ny Stand News tamin'ny 8 May 2019 ny dikanteny Shinoa amin'ity lahatsoratra ity .
Ny 8 May, namoaka lalao finday vaovao mitondra ny lohateny hoe “Game for Peace” (和平 精英) (lalao ho an'ny fandriampahalemana) tao amin'ny Weibo ny orinasa goavan'ny aterineto ao Shina, Tencent.
Tamin'io andro io ihany, nesorina tao amin'ny App Store ny dika ôrizinaly tamin'ity lalao ity “Player Unknown Battlegrounds” (PUBG 絕 地 求生) (Mpilalao tsy fantatra eny antsahan'ady), lalaon'ady hifanandrinan'ny mpilalao maro ao amin'ny aterineto, rehefa tsy nahazo lisansa momba ny lalao ara-barotra.
Tamin'ny taona 2017, dia nahatanteraka ny fahazoana ny zo hamoaka ny PUBG izay navoakan'ny PUBG Corporation, rantsan'ny orinasan'ny lalao video Koreana Tatsimo Bluehole any Shina ny Tencent. Saingy nanakiana ny lalaon'ady ny Sampan-draharaham-panjakana misahana ny Gazety, ny Fanontam-pirinty, ny Onjam-peo, ny Sarimihetsika ary ny Fahitalavitra (SAPPRFT) fa fanitsakitsahana ny “soatoavina fototra sosialista” sy fanimbana ny tanora izany.
Tamin'ny volana Martsa 2018, nanapa-kevitra ny hanatsahatra ny famoahana ireo fahazoan-dàlana ara-barotra ho an'ny lalao amin'ny aterineto sy ny finday rehetra ny mpandrindra, ka nampiato ny ankamaroan'ny lalao mba tsy hahazo tombombarotra ao amin'ny tsena Shinoa. Navoaka tamin'ny endrika andrana tsy ara-barotra ny sasany tamin'ireo lalao ireo, toy ny PUBG, sady niandry fankatoavana ny fahazoan-dàlana .
Nanomboka namoaka fahazoan-dàlana amin'ny lalao indray tamin'ny volana lasa teo ireo mpandrindra, ary nampiditra fitsipika vaovao ihany koa, izay mitaky ny lalao amin'ny aterineto sy ny finday rehetra hifanaraka amin'ny soatoavina fototra sosialista. Mandràra ny karazana votoaty toy ireto manaraka ireto avy amin'ny lalao rehetra ihany koa ny fitsipika ho an'ireo mpilalao ao amin'ny tanibe Shina:
ra, na io miloko mena, na manga na maitso
Kilalaon-doka toy ny Mahjong sy poker
references to China’s imperial past
ny firesahana momba ny tantara imperialy tao Shina
mariazin'ankizy tsy ampy taona
Manery ny mpamokatra lalao hampiroborobo ny soatoavina, ny kolontsaina ary ny sary Shinoa amin'ny alalan'ny lalaony ihany koa ilay fitsipika vaovao.
Mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny fitsipika vaovao ny endrika PUBG nosivanina amin'ny “Game for Peace” izay vaovao vao nivoaka. Lasa lalao miabo manamafy ny fandriampahalemana ilay izy ary tsy dia ahitana herisetra loatra noho ny teo aloha, ary hita ho toy ny tselatra hazavana ny tokony ho rà . Nosoloina ny teny hoe “mivoaka” (淘汰) ny teny hoe “maty voavono” (擊殺) . Manofahofa tanana ny mpilalao izany hoe manao veloma sady misariaka raha vantany vao voatifitra raha tokony ho lasa faty mihoson-dra.
Efa nahazo ny fahazoan-dàlana ara-barotra ny “Game for Peace” ary nanamafy ny Tencent fa hifantoka amin'ny lohahevitry ny “fifaninanana miady amin'ny asa fampihorohoroana” ny tantaran'ny lalao .